Wasaarad aminiga ” waan ka hortagney Weerarkii Cadaado iyo Al-Shabaab oo sheegtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
18th June 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in weerarkaas ay ka hor-tageen Ciidamada Amniga, isla markaana laga war hayay gaariga iyo wadada ay doonayeen inay isticmaalaan.
Guddoomiyaha Guddiga Farsamada ee maamul u sameynta Gobollada Dhexe Xaliimo Ismaaciil (Xaliimo Yare) ayaa sheegay in aysan jirin wax dhibaato ah oo soo gaartay ergooyinka, waxaana ay xustay in Ciidamada ay fashiliyeen weerarkaas.
Wariye ku sugan Cadaado ayaa sheegaya in gaariga ay wateen dableyda ay ka soo galeen wado aan la marin oo ku taal dhabarka dambe ee dhismaha Kafaalo oo ay degan yihiin Ergooyinka, waxaana uu intaa ku daray in saddex ka mid ah dableyda ay gaariga ka dageen, halka gaariga waxyaabaha qarxa saarnaa markii ciidamada ka shakiyeen uu isku qarxiyay meel ku dhow xarunta.
Dhinaca kale Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka Cadaado, waxaana ay tilmaamtay inay ku dileen askar ka tirsan ciidanka Itoobiya oo ku sugnaa bar koontarool ku dhow Xarunta uu ka socdo shirka Maamul u sameynta Gobollada Dhexe.
Weerarkan ayaa noqonaya kii u horeeyay ee ka dhaca degmada Cadaado, tan iyo markii uu ka furmay shirka Maamul u sameynta Gobollada Dhexe, iyadoo Cadaado oo xarun u aheyd Maamulka Ximan iyo Xeeb aanay horay uga dhicin qaraxyada iyo weerarada ka dhaca magaalooyinka kale ee dalka.